Accueil > Gazetin'ny nosy > HJRA : Tsy ambonin’ny lalàna ny mpitsabo
HJRA : Tsy ambonin’ny lalàna ny mpitsabo
Mbola mipetraka olana eto Madagasikara ny “corporatisme” ary matetika lasa sakana tsy afahana mametraka ny tena Fanjakana tan-dalàna. Nanao fitokonana tampoka ho fitakiana ny famotsorana ny naman’izy ireo miisa roa izay nosamborin’ny pôlisy ireo mpitsabo sy mpiasa eo anivon’ny Hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona etsy Ampefiloha, omaly tolakandro. Tsy izy ireo voasambotra ireo fa ny profesora Auberlin Rakototiana, lehiben’ny sampandraharaha momba ny Urologie, ary ny talen’ny DAT eo anivon’ny hopitaly. Antony fisamborana, voalaza fa miray tsikombakomba amin’i Eddy Maminirina izay fantatra amin’ny solon’anarana hoe “Eddy bois de rose” ireto mpitsabo nosamborina ireto, ary voarohirohy ho nikàsa ny hampadositra azy.
Raha hiverenana ny tantara dia voalaza fa notsaboina tao amin’ny HJRA i Eddy Maminirina izay tsiahivina ihany fa voatàna vonjimaika any amin’ny fonjan’i Tsiafahy, nanomboka ny volana febroary 2019. Mpiandry fonja miisa efatra no natao niambina azy eny amin’ny hopitaly tamin’io fotoana io. Rehefa niditra tao anatin’ny efitra tokony nitsaboina azy anefa ireo mpiandry fonja dia tsy tao i Eddy Maminirina fa teny ivelan’ny hopitaly no hita.
Fotoana fohy taorian’izay dia nampanantsoina teny amin’ny Surveillance du territoire eny Anosy ny Pr Auberlin Rakototiana sy ny talen’ny DAT, ary hatramin’izao ora hanoratana izao dia mbola voatazona anaovana fanadihadiana ao ireto farany izay voarohirohy ho mpiray tsikombakomba tamin’izao fikasàna hampitsoaka an’i Eddy Bois de rose izao. Ny zavatra somary mampalahelo amin’ity raharaha ity, vao nampanantsoin’ny pôlisy ny Pr Auberlin sy ireo tompon’andraikitra ambony iray io, dia tsy niandry ela fa avy hatrany dia nanao fitokonana ny ampahany tamin’ireo mpitsabo sy mpiasa eo anivon’ny hopitaly. Tsy mba niandry akory ny valin’ny fanadihadiana fa tonga dia mitokona, milanja sora-bavety ary mitaky ny hamotsorana tsy misy atak’andro ny naman’izy ireo.
Izany fomba fanao izany no anisany tena sakana amin’ny fampiharana ny fanjakana tan-dalàna eto amintsika. Tsara tsipihana mantsy fa tsy ambonin’ny lalàna ny mpitsabo na ny profesora eny amin’ny hopitaly ka tsy azo ampanantsoina atao fanadihadiana. Araka ny loharanom-baovao marim-pototra, fantatra fa misy ambadika tsy mazava mihintsy ity raharaha ity. Fantatra fa nisy volabe mahatratra 1,2 miliara ariary no navoakan’i Eddy Maminirina izay tsy mazava mihintsy ny nandaniana azy. Ny loharanom-baovao no milaza fa mety nampiasaina handosirana ny fonja io vola be io ka tsy kisendrasendra raha niseho ity raharaha teny amin’ny HJRA ity. Araka ny fanadihadiana natao dia fantatra fa efa matetika mivoaka ny fonjan’i Tsiafahy ity mpanondrana bois de rose antsokosoko ity, ary misy ny firaisana tsikombakomba amin’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny fonja, isan’izany ny DGAP (Directeur générale de l’administration pénitentiaire). Tsy i Eddy Maminirina ihany hatramin’i Mbola Rajaonah dia voalaza fa matetika tafavoaka ny fonja ihany koa. Ireto farany moa izay fantatra fa tsy miaraka amin’ireo voafonja hafa rehefa mihidy ao Tsiafahy fa mipetraka ao amin’ny trano natokana ho an’ny lehiben’ny mpiambina ao. Manoloana izany dia tokony avela handeha ny fanadihadiana hamantarana ny tena marina momba ity raharaha ity.